DIB U SOO SAARI KARO QARAHA: WAA MAXAY FAA'IIDOOYINKA IYO DHIBAATADA, SIDA LOO BIXIYO - XOOLAHA
Dib u soo saari karaa qaraha iyo qaraha qallalan
In cunto ee bakaylaha, miraha casiir ma degaan meel dhexe, laakiin inta lagu jiro muddey miro iyo berry, miraha cusub si fiican u buuxiyo menu xoolaha. Saaxiibayaal bakayle badan ayaa ku quudiya xoqista iyo foosha. Si kastaba ha ahaatee, cid kastaa way ogyihiin in ay suurtagal tahay in ay bixiso bakaylaha bakaylaha iyo dib u soo celintooda, laga bilaabo da'da iyo inta ay le'eg tahay.
Qaabab, sida dhammaan cuntooyinka kale ee casiir leh, waa adag tahay dheefshiidka habka dheef-shiidka, maadaama uu ku jiro fiyuus yar yar (0.9 g halkii 100 g oo ah khudradda). Maydhayaasha ayaa gacan ka geysta dhiirigelinta cuntada iyada oo loo marayo mindhicirrada, sidaas awgeed cuntada qalalan ayaa saldhig u ah cuntooyinka xayawaanka. Laakiin qaraha iyo miraha kale ee casiir leh waa in la siiyaa wax yar. Waxay sababi karaan isbeddellada ama uur-qaadidda mindhicirrada, laakiin waxay noqon kartaa waxtar leh xayawaanka caloosha. Xaaladna ma keeni karto miro la jarjaray ama midiidin ah.
Ma taqaanaa? 100 g oo ah khashinka waxaa ku jira 90 g oo biyo ah, 7.4 g oo ah karbohidrat, 0.9 g oo ah fiyuusta cuntada, 0.6 g oo borotiinka ah iyo 0.3 g oo dufan ah. Waxaa ku jira fitamiino (C, A, E, PP, fitamiinada kooxda B) iyo macdanta (birta, potassium, cobalt, magnesium, fosfooraska, iodine, iwm) oo lagama maarmaan u ah shaqada caadiga ah ee jirka.
Waxyaabaha dhadhanka ah ee dhadhanka leh iyo macaan ayaa laga yaabaa inay ka fadilaan bakaylaha waxayna noqonayaan raaxo jecel, laakiin shakhsiyaadka qaar ayaa laga yaabaa inayan rabin daaweyntan. Waxaa ugu wanaagsan in la siiyo badeecadan tayo leh oo ay la socoto hay ama cunto kale oo dheellitiran.
Sidoo kale ogow haddii bakaylaha la siin karo canab, rooti, ​​bariis iyo cherry laamood.
Khamriga waxaa la siin karaa ceelasha qaraha. Waxaad cuni kartaa hilibka macaan ee naftaada, adigoo u tagaya adoo si adag u dhaqaya sida daaweynta bakaylaha. Waxay sidoo kale ku jiraan fitamiino iyo fibre, kuwaas oo dadka aan jeclayn, waxay ka dhigayaan wax soo saar badan oo la aqbali karo dheefshiidka bakaylaha marka loo eego qashinka. Waa in maskaxda lagu hayaa in ay ku jirto diirka oo u dhaw in Nitrates iyo kiimikooyinka kale ee xoogga la saaro, kuwaas oo loo isticmaali jiray in ay koraan oo ay ka shaqeeyaan miraha. Sidaa daraadeed, way ka badbaado inaad isticmaasho qaraha beertaada, maadaama ay bakaylaha aad u nugul yihiin walxaha sunta ah.
Qooblaha waa wax la aqbali karo, laakin waa badeecooyin culus oo ku saabsan mareenka caloosha ee bakaylaha, sidaas awgeed waa muhiim inaad si sax ah u siiso.
Waa muhiim! Haddii bakteeriyadu muujiso calaamadaha caloosha ama caloosha, qalabkaan waxaa laga reebay cuntada. Intaa waxaa dheer, tallaabooyin ayaa loo qaadayaa si loo hagaajiyo dheefshiidka, maxaa yeelay waxay isku-buufintu noqon kartaa khatar loogu talagalay xayawaanka.
Ceelka waxaa la siin karaa bakayle marka habka dheef-shiidku uu u bislaado oo uu shaqeeyo isagoo aan dhicin. Haddii dhallinyaradu aanay lahayn wax dhibaatooyin dheefshiid ah, waxay bilaabi karaan in ay midho u siiyaan da'da afar bilood. Marka hore, waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo qayb yar oo ay raacaan xaaladda xayawaanka - sida ay u dhacday, haddii calooshu aysan aheyn mid fiiqan.
Quudinta bakaylaha bakaylaha wuxuu noqon karaa wax aan ka badneyn 1-2 jeer toddobaadkii. Ma siin kartid qashinka iyo diirka dhowr jeer oo isku xiga, waa in loo beddelaa miraha iyo khudaarta kale ee casiir leh. Marka qaraha la siiyo bakaylaha, waxaa la siiyaa oo kaliya, maxaa yeelay isticmaalka isku mid ah ee dhowr nooc oo miraha casiir ah waa ka hortaga xayawaankan. Dib udub wareeg ah waa in loo diyaar garoobaa isticmaalka sida quudinta hababka soo socda:
ku dhaq biyo qabow;
jar jartey jajabka sare;
googooyaa yar yar;
Goosashada qaraha iyo kaydinta xilliga qaboobaha
Waxaa ugu faa'iido badan in lagu quudiyo qaraha cusub iyo raadadka ay u tagaan bakaylaha xilliga xagaaga. Si kastaba ha noqotee, mirahaas waxaa loo ilaalin karaa waqti dheer - qaboojis ama qalalan.
Waa muhiim! Qashinka laguma kaydin khaanadda qaboojiyaha. Haddii aad ku duubto maraqa la jarjaray bacda oo ku rid qaboojiyaha, etylene sun ah oo waxyeelo u leh caafimaadka ee bakaylaha lagu sii deyn doono 24-28 saacadood gudahood.
Waxaad kaydin kartaa goosashada khashinka ka hor Sanadka Cusub, adigoo eegaya shuruudaha soo socda:
Noocyo goos goos ah oo leh xilli dheer soo kordhaya iyo hilib cufan ayaa loo doortaa kaydinta qaboobaha ("Wintering", "Slavia", "Torpeda" iyo kuwo kale);
miraha waa in la doortaa mid yar oo daba-dheer, oo leh nalka fudud, jilicsan oo jilicsan;
waa inaanay dhaawacmin;
qolka kaydinta waa inay noqdaan kuwo madow iyo si fiican u hawo;
heerkulka ugu wanaagsan ee kaydinta dhaqanka dhoobada ah waa 2-4 ºC, qoyaan - 80%;
miraha waxaa lagu keydin karaa in lagu xiro shabaqa, sanduuqyada ciidda (sida balka, dhirta), khaanadaha leh gogol la sameeyey caws, oo la daboolay ceyrinta;
waa in si gooni ah loo kaydiyaa miro iyo khudaar kale.
Noocyada hore waxaa lagu kaydiyaa wax ka badan hal bil, iyo waqtiga ugu badan ee kaydinta boogta dhexe waa ilaa saddex bilood. Beeraha dhoobada ama saliidda foosha ayaa la diyaarin karaa xilliga jiilaalka, googooyaa yar yar oo la qalajiyo oo dab la qaboojiyo foornada ama isticmaalaya qalajiye koronto. Haddii cimiladu oggolaato, waxaad ku qallajin kartaa xaaladaha dabiiciga ah, adoo ku jaraya dhuuban khafiif ah oo ku dhejinaya sawir qaro weyn leh qol leh hawo wanaagsan oo laba toddobaad ah.
Geedaha dheefshiidka ee bakaylaha si adag u dheefshiido berry iyo miraha. Sidaa darteed, badeecad u eg qaraha, waxaa jira waxyaabo ka hortag ah:
shuban iyo xanuun kasta oo nidaamka dheefshiidka;
cudurrada faafa iyo gardarrada;
uurka iyo nuujinta - inta lagu jiro muddadaa waxa fiican in la beddelo qashinka dabacasaha ama tufaaxa, laakiin qadar xadidan oo xadidan;
bakay ilaa 2.5 bilood ma siin karaan miraha casiir leh; Waxyaabaha lagu daro waxaa lagu soo bandhigaa cunto, laga bilaabo tufaaxa ama isteroberi, sababtoo ah maaha kuwo culus sida qaraha - laakiin waa in la bixiyaa 4 bilood kadib.
Waa muhiim! Yar yar ee bakayle waa, ka yar yar ee qaraha waa inuu ahaado. Sidaa darteed, wakiilada naasaha dhirta lagu qurxiyo waa in la siiyaa qaybo yar yar si aaney u kicin caloosha.
Maxaa kale oo cuni kara bakaylaha
Cuntada, bakaylaha waxay ku dari karaan cuntada soo socda:
Cuntada Cagaaran. First of dhan, waa cawska cusub iyo cagaarka beerta. Cuntada noocan oo kale ah ayaa la cunaa laga bilaabo xilliga gu'ga xilliga dayrta xilliga dayrta, maadaama ay leedahay fiitamiin badan iyo walxo muhiima oo loogu baahan yahay koritaanka iyo horumarinta xayawaanka. Cawska la gooyey ayaa lagu talinayaa in yar oo qorrax leh. Cunto wanaagsan sida dacawada, dill, jajab, yarrow.
Cunto khafiif ah. Hay waa saldhigga oo dhan ee cuntada ee bakaylaha. Marka lagu daro, waxaad siin kartaa caws, geedo geedo iyo geedo. Cows cagaaran sida qallalan, alfalfa, chamomile, jellyfish, yaryar iyo kuwo kale ayaa ku haboon hay. Shimbiraha yaryar waxaa laga soo qaataa bjørk, lini, aspen, qulqulka, qulqulka, hornbeam, sir, rooti, ​​khudaar, tufaax, iwm.
Succulent feed. Waxay ka kooban tahay biyo badan, sidaa daraadeed si fudud ayaa loo dheefshiidi karaa oo dib loo rogaa jirka. Waxaa ku jira fitamiino, macdano, carbohydrates, iyo sidoo kale fiber, qudaarta qudaarta, borotiinka. Cunto noocan oo kale ah waxaa ka mid ah xididdo, baradhada, bocorka, karootada, zucchini, farshaxanka Yeruusaalem, qaraha, kaabajka, khudaarta kale iyo miraha, iyo silage. Laga soo bilaabo miraha, tufaax iyo isteroberi ayaa ugu fiican. Nadiifinta iyo walxaha qashinka qaarkood waxay ku habboon yihiin quudinta. Khamriga waxaa la siin karaa baradho cad, caleemo kaabaj ah, iyo qaraha qaraha.
Nafaqada guud. Waxa ku jira firileyda (yull, sarreen, galley, galley), digirta, qashin (bran, cunto, cake) iyo walxo ka timaada hilibka-lafaha ama cuntada kalluunka. Waxyaabaha ay ka kooban yihiin, waxay ku jiraan kalooriyo badan, borotiinno, macdano, laakiin fitamiino yar, sida fiitamiinada, macdanta iyo mararka qaarkood wakiilada cudurrada ee cudurada (antibiyootikada, daawooyinka kale) ayaa lagu daraa cunto isku dheellitiran oo loogu talagalay kalluunka la cunay.
Ma taqaanaa? Hal qof weyn oo bakeyle ah, waa lagama maarmaan in la sameeyo goosashada hilibka ee jiilaalka miisaanka qiyaastii 40 kg, shakhsiyaad dhalinyaro ah ilaa 5 bilood - 10-15 kg. Xayawaankan hal quudinta ayaa cuni kara mugga cawska, u dhigma barkin ballaaran.
Qoob-ka-soo-bax iyo dib-u-dhaca ayaa la siin karaa bakaylaha oo keliya sida daaweyn, beddelidda cuntada ay la socoto khudaarta ama miraha kale. Waxaa si weyn u dheefshiido nidaamka dheef-shiid kiimikaadka oo uu ka hortagayo. Gali cuntada waa in ay si taxadar leh u socoto, inta oo dhan daawashada falcelinta noolaha. Haddii wax waliba ay u socoto, badeecadaan waxaa lagu quudin karaa xagaaga ama la iibsan karaa jiilaalka.
Video: wey soo saari kartaa qaraha